Liver? Transplanted – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
စင်္ကာပူနိုင်ငံ Parkway ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီက ဖိတ်ကြားလို့ အဲဒီ့ကုမ္ပဏီလက်အောက်ခံ ဆေးရုံနှစ်ရုံဖြစ်တဲ့ Glenegales နဲ့ Mt. Elizabeth ဆေးရုံကြီးနှစ်ရုံကို သွားရောက် ကြည့်ရှုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းကို စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ရပ် အသွင်နဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြပြီမို့ သည်ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံကြီးများကိုလည်း ဆေးရုံဆိုတဲ့ အသွင်အပြင်ထက် ဟိုတယ်နဲ့ ပိုတူတဲ့ အသွင်အပြင်မျိုးနဲ့ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးရာမှာလည်း စင်္ကာပူနိုင်ငံက အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သူ ထိတ်ထိတ်ကျဲ ပါရဂူဆရာဝန်များကို ခန့်ထားတာ တွေ့ရသလို ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများသုံးစွဲရာမှာလည်း နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မီ စက်ပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်သုံးစွဲထားတဲ့အကြောင်း သိရပါတယ်။ သည်နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အသည်း အထူးကုဆရာဝန်ကြီးကတော့ “စက်တွေက အဓိက မကျပါဘူး။ ကုတဲ့သူက ပိုပြီး ပဓာနကျပါတယ်”ဆိုတဲ့ စကားကို နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် ပြောခဲ့တာလေးကို သတိတရ မှတ်သားလာခဲ့မိတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို စီးပွားရေးလို လုပ်နေကြတာမို့ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးက ဝန်ထမ်းပေါင်းစုံနဲ့ အများဆုံး ထိတွေ့ဆက်ဆံရတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်နဲ့ ဘရူနိုင်း နိုင်ငံများက စာနယ်ဇင်းဆရာများကိုပါ တစ်ပါတည်း ဖိတ်ကြားပြီး သူတို့ရဲ့ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးကို ဆောင်ရွက်ကြတာပါ။
ဈေးကွက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်တာမို့ အဲဒီ့ဌာနခွဲရဲ့ ဝန်ထမ်းတိုင်းဟာ ညက်နေတယ်။ ချေငံဖွယ်ရာနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ လိုလေသေး မရှိအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးကြတယ်။ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးမန်နေဂျာအဖြစ် တာဝန်ယူထားပြီး ကျွန်တော်တို့ စင်္ကာပူကို ရောက်ကတည်းက အစစ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသူ တရုတ် အမျိုးသမီးငယ်လေးဆိုရင် မျက်နှာလေးက ပြုံးပြီး ချိုနေတယ်။ သို့ပေမယ့် အဲဒီ့နေ့က သူ့အဘွားဆုံးတာ သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှန်း အမှတ်မထင် သိခွင့်ရတော့ မချီးကျူးဘဲ မနေနိုင်ဘူး။ အဘွားအကြောင်း မေးတဲ့အခါ သူ့မျက်လုံးတွေ လှစ်ခနဲ တစ်ချက် ဝေသီသွားခဲ့တာကလွဲရင် ခရီးစဉ် အစမှ အဆုံးတိုင် သူ့မျက်နှာပေါ်က အပြုံးချိုချိုလေးက အမြဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးဘဲ ကျွန်တော် ရန်ကုန်ကို ပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာလည်း သူက ဓာတ်ချောစာကတစ်ဆင့် ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ဆက်ဆံရေးကို အရှည်သဖြင့် ဆက်လက်ထိန်း သိမ်းထားချင်တဲ့ သူ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကို ရိပ်မိလိုက်တယ်။ ဈေးကွက် မြှင့်တင်သူတစ်ယောက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်ကို သူလုပ်နေတာပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာ ဂုဏ်သတင်းကောင်းက သိပ်အရေးကြီးတယ်။ နာမည်တစ်လုံးရအောင် အချိန်ယူပြီး တည်ဆောက်ရသလောက် အဲဒီ့ရထားတဲ့ နာမည်တစ်လုံး ပျက်သွားဖို့ကျတော့ မိနစ်ပိုင်းကလေးပဲ ကြာတာ။ ဒါကို ဈေးကွက်သမားတွေက နားလည်ကြတယ်။ သူတို့လုပ်ငန်းအတွက် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ချရောင်းနေကြတယ်။ သည် ကလေးမလေးတင် မဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်တော် ဆက်ဆံခဲ့ရလေသမျှ ဈေးကွက် မြှင့်တင်ရေးဌာနက ကျား-မ ဝန်ထမ်းမှန်သမျှရဲ့ မျက်နှာတွေက ချိုနေပါတယ်။
ဒါတင် ဘယ်ဟုတ်ဦးမလဲ၊ ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ၊ သူနာပြုတွေ၊ ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေ အားလုံးရဲ့ မျက်နှာတွေက ချိုကြတယ်။ ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ချေငံကြတာကို မှတ်မှတ်ထင်ထင် သတိထားမိနေပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လို့ ဆိုရမယ်။ အဲဒီ့ Parkway ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းရဲ့ Glenegales ဆေးရုံမှာ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခံနေတဲ့ မြန်မာပြည်က အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
သူက အသက် ၆၀ အရွယ် ဦးမြင့်ကြိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၁ ရက်နေ့က အဲဒီ့ဆေးရုံမှာ အသည်းအစားထိုး ကုသမှု ခံယူထားသူဖြစ်နေတာမို့ သူ့ကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ သူ့အသည်းက ကင်ဆာဖြစ်သွားလို့ အသည်းတစ်ခုလုံးကို အစားထိုး ကုသထားတာဆိုပဲ။
“ကျွန်တော်က နေရတာ ဖားကန့်က မှော်ထဲမှာ နေတာ။ ဖားကန့်ကတော့ အသည်းဖြစ်တဲ့သူ များပါတယ်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ မှော်ထဲက ပြန်ဆင်းလာတာ။ မှော်ထဲမှာက အရက် တအားသောက်တာဆိုတော့ မျက်နှာတွေ အမ်းလာရော။ ဒါနဲ့ ဆရာဝန်သွားပြတော့ အသည်းဖြစ်ဖို့ များတယ်ဆိုတာနဲ့ ရန်ကုန်ဆင်းပြီး ရန်ကုန်က အသည်းဆရာဝန်ကြီးနဲ့ ပြတာ။ ဆရာဝန်ကြီးက ခင်ဗျာ့အသည်း ခြောက်နေပြီလို့ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကြောက်ပြီး တစ်ခါတည်း စင်ကာပူ ရောက်ခဲ့တာ။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာပေါ့။ စင်ကာပူမှာ လာစစ်တဲ့အချိန်မှာ အသည်းခြောက်တာ စဖြစ်ဖြစ်ချင်းဆိုတော့ အချိန်မီသွားတာပေါ့”လို့ ဦးမြင့်ကြိုင်က ပြောပြပါ တယ်။
အသည်းရောဂါ ဝေဒနာရှင်တွေက ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ များလှပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဇနီးရဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်လည်းပဲ အသည်းနဲ့ပဲ ကွယ်လွန်သွားတာ တစ်နှစ်တောင် ပြည့်ခါနီးနေပြီ။ နောက် ကျွန်တော်တို့ အိမ်နားက တစ်ယောက်။ သူ ကွယ်လွန်သွားတာလည်း မကြာသေး။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ မမြင်လိုက်ရဘူး။ သူ့ကိုလည်း လူကိုယ်တိုင် တစ်ခါမှ မဆုံဖူးလိုက်ဘူး။ သူကလည်း အခု ဦးမြင့်ကြိုင်လိုပဲ ကျောက်သမား၊ ကျိကျိတက် ချမ်းသာတဲ့သူပါ။ သူကိုင်ခဲ့တဲ့ အဖိုးတန် ပါလေရာ တယ်လီဖုန်းကို သူ့ဇနီးက ကျွန်တော့်ကို စွန့်ကျဲလိုက်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် အခု အဲဒီ့ ဖုန်းကလေးကို ကိုင်နေပါတယ်။
အဲဒီ့လူကျတော့ အသည်း အစားထိုးပေးမယ့် အလှူရှင် နှစ်ယောက်တောင် ရှိတယ်။ ငွေကြေးလည်း တတ်နိုင်တယ်။ သို့ပေမယ့် သူ့ကိုယ်ခန္ဓာက အသည်းအစားထိုးတာကို လက်မခံတော့ဘူး။ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ် နိုင်ငံများက ဆေးရုံပေါင်းစုံမှာ အလီလီကြိုးစားပေမယ့် မရတော့ဘဲ နောက်ဆုံးတော့ မန္တလေးမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူ ကွယ်လွန်တော့ အသက် ၄၀ ကျော်ရုံလေးပဲ ရှိသေးတယ်။
နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရတဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ စင်္ကာပူကို မလာခင် တစ်ရက်၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ညမှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဝတ္ထုတို ဆရာ၊ ဆရာမာန်မြင့်။ အဲဒီ့နေ့က ဆရာ့သားကြီးဆီကနေ တယ်လီဖုန်း စာတန်းသတင်း ဝင်လာတယ်။ သူ့အဖေကို ဆေးရုံတင်ထားရတယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ခရီးသွားမယ့်ဆဲဆဲမှာပဲ ပန်းလှိုင်ဆေးရုံကို အပြေးအလွှား သွားခဲ့ပါသေးတယ်။
ဆရာမာန်မြင့်ကို မြင်ရတော့ အဆမတန် ဖောင်းအစ်နေတဲ့ ဆရာ့ဗိုက်ကြီးကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဇနီးမောင်နှံမှာ ဝမ်းနည်းပက်လက်။ ဗိုက်ထဲက ရေတွေကို စုတ်ထုတ်နေကြောင်းပြောတော့ ဆရာက “ဗိုက် သုံးခါ ဖောက်ပြီးရင် ရှောတာပဲဗျ”လို့ ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ ဆရာ့သားက ဆရာ့ကို စင်္ကာပူ ခေါ်သွားမယ့်အကြောင်း ပြောနေပါတယ်။ နောက် သုံးရက်နေရင် စင်္ကာပူရောက်ပြီပေါ့။ အကောင်းဆုံးကို မျှော်လင့်ရင်း၊ ဆရာ ကျန်းမာပါစေလို့ ကျိတ်ဆုတောင်းရင်း ကျွန်တော်တို့လည်း ဆေးရုံ က ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ဆရာ့ဗိုက်ကြီးကို မြင်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ရှစ်နှစ်လောက်က ဆုံးသွားတဲ့ မိတ်ဆွေကို သတိရမိရပြန်တယ်။ အဲဒီ့မိတ်ဆွေကတော့ အသည်းမကောင်းတဲ့ကြားကကို အရက်ကို ဖိသောက်သွားတဲ့သူပါပဲ။ ဗိုက်ကြီး အဆမတန် ပူလာတော့မှ ဆေးရုံတက်ပါတယ်။ ဆေးရုံကျတော့လည်း အရက်ခိုးသောက်ဖို့ ကြံပါသေးတယ်။ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ အစာကတော့ နဂိုကတည်းက သိပ်မစားတဲ့သူမို့ သူ့အခြေအနေကို ကျွန်တော်တို့ မမှန်းဆမိတတ်ခဲ့ဘူး။
မကြာဘူး။ အဲဒီ့လူ ဆေးရုံရောက်ပြီး ဆယ်ရက်မပြည့်ခင်မှာ တိမ်းပါးသွားတယ်။ အသည်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကွယ်လွန်သူကို ပထမဆုံး ကြုံဖူးလိုက်ခြင်းပါပဲ။
အခု ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ ထိုင်နေတဲ့ ဦးမြင့်ကြိုင်ကတော့ စိုစိုပြည်ပြည်။ ပိန်ပိန်ပါးပါး။ လူကောင်း ပကတိတစ်ယောက်လို ကျန်းမာနေတဲ့ပုံမျိုးနဲ့။ သို့ပေမယ့် သူ့အသည်းက အစားထိုးထားတာတဲ့။
“အဲလိုနဲ့ ၁၉၉၉ က စပြီး ကုရင်း ကုလာလိုက်တာ ၂၀ဝ၆ကျတော့ အခြေအနေက တော်တော်လေး ဆိုးလာတာနဲ့ အသည်း လဲရတော့တာပါ။ အလှူရှင့်ဆီက အသည်းတစ်ခြမ်းကို ကျွန်တော့် အသည်းတစ်ခုလုံးနဲ့ လဲထည့်လိုက်တယ်။ အလှူရှင်ရဲ့ အသည်းက သုံးလနေရင် သူ့နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပဲ။ လုပ်ဆောင်ချက်လည်း နဂိုအတိုင်းဖြစ်တာပဲတဲ့။ ကျွန်တော့်ကျတော့ တစ်နှစ်လောက်နေမှ နဂိုအတိုင်း ပြန်ကြီးလာတာပါ။ လူတစ်ယောက်မှာ အသည်းက နှစ်ခြမ်းရှိတာလေ။ လဲတုန်းက တစ်ခြမ်းပဲ ရှိနေရာကနေ နောက်ပိုင်းကျ နှစ်ခြမ်းပြန်ဖြစ်သွားတာ။ အရွယ်အစားကတော့ အခုဆို ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ကြီးလာပြီ။ လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ အတူတူပါပဲ”လို့ ဦးမြင့်ကြိုင်က ဆက်ရှင်းပြပါတယ်။
“အစက ရန်ကုန်မှာ CT Scan ရိုက်ကြည့်တော့ အသည်းမှာ အဖုကလေးတစ်ခု တွေ့တယ်။ ဝ.၅ စင်တီမီတာလောက် ရှိမယ်။ အဲဒါလေး ပေါ်လာတော့ ကျွန်တော်လည်း ကြောက်ပြီး စင်ကာပူ လာပြီး စစ်တာ။ အဲဒီ့ကြားထဲမှာ နှစ်လလောက် ကြာသွားတော့ ဝ.၅ စင်တီပဲ ရှိတဲ့ အဖုက တစ်လက်မ ဖြစ်လာရော။ ကြီးလာတာပေါ့။ ဆရာဝန်ကတော့ ရောက်ရောက်ချင်း လဲစရာတော့ မလိုသေးဘူးဆိုပြီး ကီမိုထိုးပေးပါတယ်။ ကင်ဆာဆေးပေါ့။ ထိုးပြီး တစ်လလောက် ကြာတဲ့အခါမှာ ပြန်စစ်တော့ ပျောက်သွားပြီ၊ မရှိတော့ဘူး”
“မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ဆေးထိုးပြီးတော့ ပြန်သွားတာ။ သုံးလကျမှပြန်လာတော့ နည်းနည်းလေးတော့ ထွက်လာပြီ၊ သိပ် မများသေးဘူး။ နောက် ခြောက်လလာတဲ့အခါကျတော့ မရတော့ဘူး၊ အကြီးကြီးဖြစ်ကုန်ပြီ၊ အဖုကြီးတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ၊ အကြီးကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ အသည်း မလဲရင် မရတော့ဘူးတဲ့။ ဆေးတစ်ချောင်း ထိုးလိုက်ရင်တော့ တစ်လလောက် ခံတယ်။ တစ်လနောက်ပိုင်းမှ လဲလို့ရမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း မြန်မာပြည် ပြန်သွားပြီးမှ အလှူရှင် ရှာရတာပါ”
ဦးမြင့်ကြိုင်က စိတ်ပါလက်ပါ ရှင်းပြပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ အခြေစိုက်တဲ့ ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းက ဖိတ်လို့ ရောက်လာတာ။ အဲဒီ့က ဆေးရုံမှာမှ အသည်းလဲထားသူ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကို အပ်ကျမတ်ကျ တွေ့တာကိုက အဆင်ပြေလွန်းနေပြီ။ သည်ကြားထဲ ဖြေကြားပေးတဲ့ ဦးမြင့်ကြိုင်ကလည်း လိုလိုလားလား လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ရှိနေတာမို့ အတော်လေး အားရစရာ ကောင်းနေပါတယ်။
အလှူရှင်ရလာတဲ့အခါမှတော့ အလှူရှင်ကိုရော၊ ဝေဒနာရှင်ကိုပါ အသေးစိတ် ပြန်စစ်ဆေးတယ်။ ဒါ့အပြင် စင်္ကာပူတရားရုံးကပါ ဥပဒေနဲ့ အညီ စုံစမ်းမေးမြန်းပြီး အလှူရှင်ဆီက သဘောတူညီချက်ကို တရားဝင် ရယူပြီးခါမှ လဲလှယ်ခွင့်ရတယ်လို့ ဦးမြင့်ကြိုင်ဆီကပဲ သိရပါတယ်။ “ခွဲစိတ် ခန်းထဲကို မနက်အစောကြီး ဝင်သွားတာ။ ခြောက်နာရီမှာ စပြီး တွန်းလှည်းနဲ့ ဝင်သွားတာ ည ခြောက်နာရီမှ ပြန်ထွက်လာရတယ်။ စုစုပေါင်း ၁၂ နာရီလောက် ခွဲစိတ်ရတာပေါ့။”
“ကျွန်တော့်အသည်းထုတ်ပြီးတော့ ကျွန်တာ့် အမျိုးသမီးကို လာပြပေးသေးသတဲ့။ ဇလုံကြီးနဲ့ လာပြပေးသေးတယ်”လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဦးမြင့်ကြိုင်နဲ့ အတူပါလာတဲ့ သူ့အမျိုးသမီးက အဲတုန်းက အဲဒီ့ ဦးမြင့်ကြိုင်ရဲ့ အသည်းကို လက်နဲ့ ထိုးကြည့်ခိုင်းတဲ့အကြောင်း၊ သူက မထိုးရဲတော့ သူနာပြုဆရာမက အသည်းကို နှိပ်ပြတဲ့အကြောင်း၊ အသည်းက မာတောင့်တောင့်ကြီး ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေ ဝင်ပြောပြပါသေးတယ်။
“အဲဒီ့နောက် အထူး ကြပ်မတ်ကုသခန်းမှာ တစ်ပတ်နေပြီးတော့မှ အပြင်ဆောင် ပြန်ရောက်လာတာ။ အပြင်ဆောင်မှာ သုံးပတ်ပေါ့၊ စုစုပေါင်း အားလုံး တစ်လပေါ့။ တစ်လဆိုတော့ အားလုံးအပြီး စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၂ သိန်း ၈ သောင်း ကုန်ကျပါတယ်။ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် သိန်းနှစ်ထောင်ကျော်လောက်ရှိမှာပေါ့”တဲ့။
ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ သိန်းနှစ်ထောင်ကျော် မတတ်နိုင်တာနဲ့ပဲ သေမှာဆိုတဲ့အတွေးက ခေါင်းထဲ ဖျတ်ခနဲ ဝင်လာပါတယ်။ အင်း… ငွေ၊ ငွေ။ ငွေရှိရင် အသည်းတောင် လဲလို့ ရပါကလားဆိုတာကြီးကလည်း ခေါင်းထဲ ဝင်လာပြန်သေးတယ်။ သို့ပေမယ့် ကျွန်တော်ကိုင်နေတဲ့ ပါလေရာဖုန်းလေးရဲ့ မူလပိုင်ရှင်ကျတော့လည်း ငွေတတ်နိုင်ပေမယ့် လဲလို့ မရလို့ အသက်ပေးသွားခဲ့တာလည်း တစ်နှစ်ကျော်၊ နှစ်နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကိုလည်း ဦးမြင့်ကြိုင်ကပဲ ရှင်းပြပေးပြန်တယ်။
“ကင်ဆာသာ ဖြစ်နေတာ၊ မသိဘူး။ သူတို့ ပြောပြတာကတော့ သည်လို ကင်ဆာဖြစ်တဲ့သူတွေက များသောအားဖြင့် သိပ်ခံစားချက် မရှိဘူး။ ဘာဝေဒနာမှ သိသိသာသာ မခံစားရဘူးပေါ့။ ဝေဒနာ တစ်ခုခု ခံစားလာရပြီဆိုရင်တော့ အခြေအနေ အတော်ဆိုးနေပြီ။ မျက်နှာလည်း ခြောက်လာပြီ။ နားရွက်လည်း ခြောက်လာ၊ မဲလာပြီဆို တော်တော် အခြေအနေ ဆိုးပြီ။ ကင်ဆာလည်း ပြန့်ပြီ။ ကုသဖို့ ခက်သွားပြီ။ ကင်ဆာပြန့်ပြီဆို မရတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့လာတော့ အရင်စမ်းကြည့်တယ်၊ ကင်ဆာ ပြန့်မပြန့်။ ကင်ဆာပြန့်ပြီဆို အသည်းလဲလို့ မရတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေမှာ များသောအားဖြင့် ဖြစ်တတ်တာက အသည်းဖြစ်နေမှန်း စသိတာနဲ့ နှောင်းသွားပြီ။ စပြီး လက္ခဏာ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြကတည်းကကို စောသေးတယ်။ ခြေထောက်ယောင်၊ မျက်နှာအမ်း၊ ရေဖျဉ်းဖြစ်ပြီဆို ဆိုးပြီ။ လဲတဲ့အဆင့် မရှိတော့ဘူး”လို့ ဦးမြင့်ကြိုင်က ဆက်ပြောပြပါတယ်။
ကျွန်တော့်စိတ်က ဆရာမာန်မြင့်ဆီ ရောက်သွားပြန်တယ်။ ဒါဆို ဆရာ့အခြေအနေလည်း ဆိုးနေရှာပြီပေါ့။ (တကယ်လည်း ကျွန်တော် စင်္ကာပူက ပြန်ရောက်ပြီး နှစ်ရက်မြောက်တဲ့ ၂၁-ဝ၃-၁၀ မှာ ဆရာမာန်မြင့်လည်း စင်္ကာပူမှာပဲ တိမ်းပါးသွားပါတော့တယ်။ ဆရာပြောခဲ့သလို သူ့ဗိုက်ထဲက ရေတွေ သုံးခါ ဖောက်လိုက်အပြီးမှာပဲလားတော့ မသိပါ။)
အခု ဦးမြင့်ကြိုင်ကလည်းပဲ ဆရာမာန်မြင့်လိုပဲ အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုးကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်စပြုချိန်မှာ ၂၀ဝ၆မှာ အသည်း လဲလိုက်ရာက အခုအချိန်အထိ ထူထူထောင်ထောင်ကြီး ဖြစ်နေတာ ကျွန်တော့်မျက်မြင်ပါပဲ။ သူကတော့ အသိစောသွားတယ်ပေါ့။
ဆေးပညာရဲ့ စွမ်းပကားတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာကို မော်တော်ယဉ်တစ်ခုလိုပဲ မကောင်းတာ ဖြုတ်လဲလို့ ရတဲ့ ခေတ်တစ်ခေတ်ကို ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းနေကြပါတယ်။ ဆေးရုံဆေးခန်းဆိုတာတွေကလည်း အဲဒီ့ခေတ်နဲ့အပြိုင် ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ဧရာမ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးများအဖြစ် အပြိုင်းအရိုင်း ပေါ်ထွန်းနေပါပြီ။
တတ်နိုင်သူတွေက တတ်နိုင်သလို ဇာချဲ့နိုင်အောင်လည်း အဲဒီ့ ဆေးရုံကြီးတွေရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးပုံတွေက ထူးခြားတယ်။ အဲဒီ့ Parkway ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းရဲ့ ဆေးရုံမှာဆိုရင် “တော်ဝင်ခန်းဆောင်” (Royal Suite)ဆိုတာတောင် ရှိသတဲ့။ ဆေးဖိုးဝါးခ၊ ကုသစရိတ်မပါသေးဘဲ တစ်ညကို စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၄၀ဝ၀ ကျော်ပေးရင် နေလို့ ရတယ်ဆိုပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ရောက်နေချိန်မှာ အဲဒီ့အခန်းမှာ လူနာ ရှိနေလို့ ဝင်ကြည့်ခွင့် မရခဲ့ကြပါဘူး။ အဲဒီ့အခန်းမှာဆိုရင် ဘဏ္ဍာစိုး (butler) တောင် ထားပေးပြီး အစားအသောက်ကို ကြိုက်သလို မှာယူ စားသောက်လို့ ရပါသတဲ့။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ရံတော်များအပါအဝင် နောက်တော်ပါများ အိပ်ဖို့၊ နားဖို့ ခန်းဆောင် အပိုသတ်သတ်တောင် ပါသေးဆိုပဲ။
သူတို့ကတော့ ပိုက်ဆံတွေလည်း နင့်နေအောင် ယူတယ်၊ ယူတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ထိုက်တန်အောင်လည်း ဝန်ဆောင်မှုကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပေးနိုင်အောင် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားနေကြတာကို မြင်ခဲ့ရတာပါပဲ။ အဲလို မကြိုးစားလို့လည်း မဖြစ်ဘူးလေ။ အပြိုင်အဆိုင်တွေ ပေါများလှတဲ့ ဈေးကွက်ကြီးပေပဲကိုး။
ဘန်ကောက်မှာလည်း ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတွေ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ မလေးရှား၊ ဘရူနိုင်း စတာတွေမှာလည်း ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတွေ အပြိုင်းအရိုင်း ပေါ်ထွန်းနေတာမို့ ဘက်ပေါင်းစုံက ကြိုးပမ်းနိုင်မှ တန်ကာကျမယ့်သဘောကို သူတို့က ဘဝပေးအသိအဖြစ် သိနေနှင့်ကြပုံပါပဲ။
၂၀၁၀ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၈ ရက်နေ့ထုတ် Bi Weekly Eleven ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြပါရှိခဲ့တာလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်ထားတာပါ။
Author lettwebawPosted on 13 April 2010 Categories Reproduction
4 thoughts on “Liver? Transplanted”
13 April 2010 at 12:03 pm
ချိုမှ ဖြစ်မယ်ဆရာ။ မျက်နှာတွေလည်း ချိုရမယ်။ အပြုံးတွေလည်းချိုရမယ်။
Nann Thandar Aung says:
မဟောင်းသေးတာတွေ အသစ်ပြန်ဖြစ် ခံစားရပါတယ် ဆရာ။
ဆောရီးပါ သမီး။ ဆရာ့ကြောင့် အဟောင်းက အသစ်ဖြစ်သွားရတာလည်း သေချာပါတယ်။ သည်အတွက် သမီးကို ဆရာက အနူးအညွတ် တောင်းပန်လိုက်ချင်ပါတယ်။ စာရေးတဲ့သူတွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးမိတဲ့ ၀ဋ်ဒုက္ခတစ်ခုလို့သာ အောက်မေ့ပါတော့ ငါ့သမီးရယ်…
My dad feels better by drinking boiled “Hinn Ngote Ywet” . Of course he also took modern medicines. When he found out that he had C virus, part ( maybe 1/3 ) of his liver is getting dry. He already did blood test and ultrasound test. The doctor confirmed that his liver is better little count of C virus.
Previous Previous post: Does Your Mind Really Belong to You?
Next Next post: A little I have just learned about Singapore